My Big Boy Miki is 4!
Animal Groups Against Cesar Millan
Myanmar Chinese Muslim Heroine, Daw Win Mya Mya
Turkey: NATO’s ‘Open Prison’ by Alex Alexiev
Greatest Burmese Muslim Hero and Martyr Maung Thaw Ka
Ayumi Hamasaki to divorce husband
Ceylyn Tay, it's not about race but about class, OK!
Posted: 18 Jan 2012 10:29 AM PST
Below video is taken in October 2008, when Miki was just9months and looking mighty cute I think I wanna dip him in Nutella and swallow him whole.
The next video is taken3days after his second birthday ( 20 Jan 2010). He spoke very well but very pelat as well! Hehe!
His hair was short and curly and he was still in diapers.
If you wanna takeapeek into our lives, just see below video and you will understand what I mean by Miki can speak very fast and non-stop.This video is taken when Miki was3years old.
At3he no longer wearsadiaper day and night, likeatypical boy he loves robots (like Real Steel that speak of in the video), fights, cars and zombies. He rides his bicycle likeapro and can read and writealittle bit. He sleeps in his own room and his hobby is story-telling. One of the sweetest story or conversation that we had was posted on my FB statusacouple of weeks ago -
"Yesterday Miki talked for 15 minutes about the characteristic of the car he is going to buy once he getsajob. It isagreen car with sirens and missiles at the back. Miki is going to drive Mummy and Daddy to Mamak with that car and once Adik Miki keluar, Adik will sit at the back. The car has many cool button, click on this one and flowers will come out, click on that and another car will come out… There are dozens of buttons and Mummy can't remember their functions already but there is this button that if you press it, pizza, drinks complete with serviettes, fork and spoon will appear. I told Miki this is the best button because Mummy doesn't have to cook. Then Miki said there is another button kalau tekan keluar longkang. LONGKANG?
Indeed Mummy and Daddy are very much in love with you Miki. We often watch your old videos because you seem to be growing too fast and we just can't get enough of you. Yesterday 17 Jan 2012, you turned4years old. You want Nike football boots for your birthday. You know I would buy you the world if you desire so, but baby you have to always remember who you are, your roots, your background. Always be good my baby, to God, to your family and to all other people you will meet throughout your life. I am wishing you the blessings from Allah swt on your birthday, Miki. May he bestow you with good health, strong faith and protect you from all the harm there are out there. Insya Allah!
Posted: 18 Jan 2012 07:18 AM PST
Posted: 18 Jan 2012 06:51 AM PST
Shahrizat is now onathree weeks leave, hopefully to ponder over her fate and that of her family. I do not wish to speculate what will become of her when she is back from leave, and hopefully by then Malaysians would haveabetter insight as to how the case will proceed i.e. will there be charges leveled at the owners of the NFC or otherwise. I don't believe that Shahrizat would be asked by the party leadership to resign knowing that she could bring others down with her over the NFC issue. The only choice that the party leadership has is for her to voluntarily exit the party and with 'conditions' attached.
As of now, the focus on the NFC fiasco is the misappropriation and abuse by the NFC management's handling of the project where accusation is targeted at Shahrizat's husband and her three children. But little attention is given to the people and authorities that wereaparty to have approved the project. Had the project being closely monitored and procedures abided strictly by the relevant government authorities, I think the project could have been saved from the mess that was reported. I am also not expecting that the approval was withouta'side deal' to benefit someone of influence or simplya'toll keeper'.
Clearly, the NFC fiasco has grown from bad to worse. The deeper you prod, the more is revealed, and now out comes the credit card spending amounting to RM600 thousand by NFC. Now, it would be interesting to know what was actually spent. I hope it is not for some personal luxury items like expensive watches, bags, shoes, perfumes and clothing that bears exclusive and branded names. I think there is that tendency to do the aforesaid because the money isn't theirs.
Finally, let's await the outcome of the investigation by the police and MACC. I would definitely not want to listen to what Muhyiddin or Noh Omar has to say about the case, and it would be best that they lay off from having to do anything with the ongoing investigations. Actually, they ought to be investigated too rather than being asked to look into the case, as ordered by PM Najib.
Cesar Millan, the television celebrity dog trainer, teaches people how to be the leader of their canine "pack."
when the famed "dog whisperer" makes an appearance at the Auditorium
Theatre Sunday to share his views on dog behavior, he will be greeted by
a small pack of protesters decrying his controversial dominance-based
Aboutadozen dog trainers from
western New York will
Posted: 18 Jan 2012 05:58 AM PST
Source: Moe Ma Ka, ပူတာအိုအကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသူ ဒေါ်ဝင်းမြမြနှင့် အင်တာဗျူး – Daw Win Mya Mya Interview by မင်းမင်းလတ်(ရွှေမြစ်မခ)
အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ကို သိုင်းမယ် ၀ိုင်းမယ်၊ အလုပ် လုပ်လို့ရတယ်။ နေရာက တော့ လူငယ်တွေ လူလတ်ပိုင်းတွေကိုပေးချင်တယ်"
၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ရက်နေ့တွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကြောင့် ပူတာအို အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသူ ဒေါ်ဝင်းမြမြကို ၎င်း၏နေအိမ်တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်၊ အဆိုပါမေးမြန်းမှုကို တင်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ဒီနေ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တင်မကပါဘူး တစ်နိုင်ငံလုံးပေါ်မှာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးတယ်ဆိုတာ ဒါက လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အလုပ်ကို၊ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို သမ္မတကြီး အနေနဲ့ ခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီး စဉ်းစားပြီးတော့မှ ရဲရဲဝင့်ဝင့်နဲ့ ပီပီပြင်ပြင် ပေါ်ပေါ် လွင်လွင် ထင်ထင်ရှားရှား မြင်သာထင်သာ လုပ်ပေးလိုက်တယ်။
ဒါကိုကျေနပ်တယ် ရှေ့လဲပဲ နောက်ထပ်ပြီးတော့ ၀န်ထမ်းတွေ ကျန်ပါသေး တယ် အင်မီဂရေးရှင်းတွေ ၊ ကာစတန်တွေ ၊ ထောက်လှမ်းရေးတွေ သူတို့ကိုလဲ လွှတ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီနေ့ လွှတ်ပေးတာကိုလဲ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ် လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို လုပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ကျေနပ်မိတယ် ၊ ကျေးဇူးလဲ တင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ကုန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၂၀)အတွင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရေးဟာ တော်တော်ကို အကျည်း တန်ခဲ့တာပါ။ ဒီအကျည်းတန်ခဲ့တဲ့ ကုန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကို ပြည်ဖုံးကားချပြီးတော့မှ လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့က တိုင်းပြည်အတွက်ကို သူတို့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကိုလုပ်မယ် လုပ်ကို လုပ်ရမဲ့အလုပ်တွေကို လုပ်မယ် ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကို စေတနာနဲ့ လုပ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့လဲ ဒီကိစ္စတွေကို ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထက်ထက်မြက်မြက် ပိုပြီး လုပ်သွားဖို့ လိုပါတယ်။ (၁)နှစ်လောက်အတွင်းမှာ အခြေအနေတွေ ပြောင်းလဲသွားတယ်၊ မြင်သာထင်သာ ပြောင်းလဲသွား တယ်ဆိုတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာလဲ ယုံကြည်မှု ပိုရှိသွားမယ် ၊ ခုနက တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ ဒီလက်နက်ကိုင်တွေပေါ့နော် ဒီတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေကလဲ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပါပဲ။ ကိုယ့်အမျိုးသားရေးအတွက် ကိုယ်လုပ်ကြတာပါ။ အလွန်ကို လေးစားပါတယ်။ ဒီနေ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ် နိုင်ငံရေးသမားတွေ လွှတ်ပေးနေတယ် ၊ ဒီမိုကရေစီကိုလဲ တရွေ့ရွေ့ ပိုပြီး ထင်သာမြင်သာ ဖြစ်အောင် ပေးနေတယ်ဆိုတာတွေကို တွေ့ရတဲ့အခါ ကျေနပ်ပါတယ်။ ဒါကို ပိုပြီးတော့ သွက်သွက် လက်လက်လေး ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံရေးကတော့ မသေမချင်း လုပ်မယ်။ အဖွဲ့ချုပ် အလုပ်ကိုလဲ မသေမခြင်း လုပ်မယ်။ သို့သော် အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ တာဝန်တွေကိုတော့ လူလတ်ပိုင်းတွေ လူငယ်တွေကို တာဝန်ပေးချင်တယ်။ ကိုယ်က ဘယ်လိုနေရာမှာရှိရှိ ကိုယ်က ဒီအလုပ်ကို တာဝန်ကျေနေမှာပဲ။ နောက်ထပ် လူငယ်တွေ လူလတ်ပိုင်းတွေ ဒီအနှစ်(၂၀)ကျော်အတွင်းမှာ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပေးချင်သူတွေ နောက်ထဲမှာရှိတယ်။ သူတို့လေးတွေကို နေရာပေးချင်တယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ အဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ကိုတော့ မယူတော့ဘူး အဖွဲ့ချုပ် အလုပ်ကိုတော့ တောက်လျှောက် စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်နေမယ်။ နိုင်ငံရေးကိုလဲ စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်သွားမယ်။ နေရာမယူပဲနဲ့ လုပ်မယ်။ နေရာကိုတော့ လူငယ်တွေနဲ့ လူလတ်ပိုင်းတွေကို တာဝန်ပေးချင်တယ်။
မေး။ ။ နေရာမယူပဲလုပ်မယ် ဆိုတာက NLD ပါတီကို ပြန်ဝင်မှာလား မ၀င်ဘူးလား။
ဖြေ ။ ပါတီကိုပြန်ဝင်မယ် ပါတီရဲ့ တာဝန်ပေါ့နော် တိုင်းစည်းတာဝန် မြို့နယ်စည်း တာဝန်ကိုတော့ မယူတော့ဘူး၊ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ကို သိုင်းမယ် ၀ိုင်းမယ်၊ အလုပ် လုပ်လို့ရတယ်။ နေရာက တော့ လူငယ်တွေ လူလတ်ပိုင်းတွေကိုပေးချင်တယ်။ ကိုယ်ကတော့ ဘယ်လိုမဆို ပါမှဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိတယ်၊ ကိုယ့်ကိုလဲပဲ မပါလို့မဖြစ်ဘူး ဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ သို့သော်နေရာလေးတွေကိုတော့ ကျန်တဲ့သူတွေကို ပေးချင်တယ်၊ အဲဒီဆန္ဒရှိတယ်။
မေး။ ။ နိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများမှာ နိုင်ငံရေးကြောင့် ကျတယ်ဆိုပေမဲ့ အခြားပုဒ်မတွေ တပ်တာမျိုး ရှိတယ်၊ ဥပမာပုံနှိပ်အက်ဥပဒေတို့ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေတို့ ဆိုပြီး ပုဒ်မတွေ အမျိုးစုံတပ်ပြီး ချခဲ့တာပေါ့။ ဒေါ်ဝင်းမြမြကိုရော ဘယ်ပုဒ်မနဲ့ချပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ (၅ည) နဲ့ပါပဲ။ နိုင်ငံရေးပုဒ်မနဲ့ ချပါတယ်။ အမှန်တော့ ဘာအပြစ်မှ မရှိပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ အပြင်မှာ မထားချင်လို့ ထည့်တယ်လို့ပဲ ခံယူတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမေရိကန် သံတမန်တွေ သံအရာရှိတွေနဲ့ တွေ့တယ် ၊ တွေ့တဲ့အခါမှာ သံအရာရှိတွေက အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကို ခွင့်တောင်းပြီးမှ တွေ့တာ။ တရားဝင်တွေ့တာပဲ တိတ်တိတ်ပုန်း ခိုးတွေ့တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီသံတမန်တွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာ သူက ဘာတုန်းဆိုတော့ NLD မှာ ခုလို မီဒီယာတွေက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လုပ်လို့ မရဘူး။ မီဒီယာအခွင့်အရေးတွေ မရသေးဘူးဆိုတော့ လုပ်လို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်၊ သတင်းစာထဲမှာပါတဲ့ ကိစ္စတွေ ဥပမာ စဉ့်ကူးမြို့နယ် ရွှေပြည်ရွာက NLD ( ၆၈ ) ဦး နှုတ်ထွက်တယ်။ ရွှေပြည်ရွာမှာ (၆၈)ဦး နှုတ်ထွက်တာ မဟုတ်ဘူး အဖွဲ့ချုပ်ဝင်မှ (၈)ဦးပဲရှိတယ်။ အဲဒါမျိုးကို သံတမန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ သူတို့ကမေးတယ် သတင်းစာထဲမှာ NLD က (၆၈)ဦးနှုတ် ထွက်တယ်မေးတော့ အမှန်အတိုင်းပြောရတယ်လေ။
ကျွန်မ ရွှေပြည်ရွာကို သွားခဲ့တယ်။ သွားပြီးတော့ ချက်ချင်းမေးတယ်။ မေးတော့ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် (၈)ဦးပဲ ရှိတယ် (၆၈)ဦးနှုတ်ထွက်တယ် ဆိုတာ သတင်းမှားတယ် လို့ပြောတယ်။ နောက်ပြီးကျတော့ အနောက်မြောက်မြို့နယ် ဆိုင်းဘုတ်တွေ ဖြုတ်ခံရတယ်။ ကျွန်မတို့ NLD ဆိုင်းဘုတ်တွေ ညသန်းခေါင်မှာ လိုက်ပြီး အဖြုတ်ခံရပါတယ် ၊ ဒါတွေပြောတယ် ၊ ( ၁၇ )နှစ်နှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေကိုပြောပြတယ်။ ဒါက နိုင်ငံခြားသံတမန်တွေက ပြည်တွင်းထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို သုံးသပ်ချင်တဲ့အခါမှာ တာဝန်ရှိတဲ့ NLD ကိုမေးတယ် ၊ ပြောရမှာပဲ။
နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း ဆိုတာ သံတမန်ဆက်ဆံရေးတွေ ရှိတယ်။ ဒါ အပြစ်မရှိပါဘူး။ ပြောတာလဲပဲ ဒါတွေပဲပြောတာပါ။ အဲဒီဟာက တစ်ခု။ နောက်တစ်ခုက မြို့နယ် (၃၀) အစည်းအဝေး တက်ရောက်မှုတဲ့။ မြို့နယ်(၃၀) အစည်းအဝေး ဆိုတာ စက်တင်ဘာဆို အဖွဲ့ချုပ် ထူထောင်တာ နှစ်ပတ်လည်နေ့ ၊ အဲဒီမတိုင်ခင်ကြရင် ဗဟိုရုံးချုပ်က စာထွက်တယ်။ မြို့နယ်မြို့နယ်တွေမှာ ၊ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး ကျန်းမာရေး အစစအရာရာတွေကို တင်ပါ ဆိုတော့ ဒါမြို့နယ်တွေကို အစည်းအဝေးခေါ်ရတယ်။ မြို့နယ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ စီးပွားရေး အဲဒါတွေကို တင်ပြတယ်။ ဒါတွေကို ဗဟိုကို ပြန်တင်ပေးရတယ်။ ဒါပဲ အစည်းအဝေး ဆိုတာက။ ဒါကြောင့်မို့လို့ စစ်ကြောရေး မှာပြောတယ်။ ဒီမြို့နယ်(၃၀) အစည်းအဝေးကို ကျွန်မတို့ သွားတက်တာမဟုတ်ဘူး ၊
ကျွန်မတို့တိုင်းစည်းတွေ က ဒီမြို့နယ်(၃၀)အစည်းအဝေးကို ခေါ်လိုက်တာ။ ကျွန်မတို့ တိုင်းစည်းတွေက ဦးဆောင်ပြီး ခေါ်လိုက်တာ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၇ရက်နေ့မှာ မြို့နယ်တိုင်းရဲ့ အခြေခံ ကျန်းမာရေး နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးတွေကို ဗဟိုကို တင်တာ။ ဒါပဲ ။ အဲဒါနဲ့ဖမ်းခံရတာ။
ဖြေ။ ။ချခံရတာတော့ (၁၂)နှစ် ၊ အယူခံ(၄)နှစ်နိုင်တယ် (၈)နှစ်ကျတယ်။ ၂၀၀၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၂၇)ရက်နေ့မှာ စပြီး ထိန်းသိန်းလိုက်တယ်။ စစ်ဆေးရေးစခန်းမှာ (၈)ရက် နေ့ည မအိပ်ရပါဘူး။ စစ်ကြောပါတယ်။ အောက်တိုဘာ (၅)ရက်နေ့မှာ ထောင်ကို ပို့လိုက်တယ်။ ထောင်ကိုပို့လိုက်ပြီးတော့ နောက်နှစ် စက်တင်ဘာကျတော့မှ ရုံးတင်တယ်။ တစ်လတိတိနေပြီး အောက်တိုဘာကျတော့မှ ပြစ်ဒဏ်တွေ ချလိုက်တယ်။ ပြစ်ဒဏ်တွေချပြီး မတ်လ(၂၃)ရက်နေ့ကျမှ မြစ်ကြီးနား ပို့လိုက်တယ် (၂၈)ရက်နေ့ကျတော့ ပူတာအိုကို ဆက်ပို့ လိုက်တာပါ။ အဲဒီတော့ လေးနှစ်ကျော်ကျော်နေခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော်လဲပဲ သူတို့ တစ်နှစ်ကျော်ကျော် ချုပ်ထားတာကို လျှော့ရက် မပေးဘူး ၊ ပေးတာ မပေးတာတော့ ထားလိုက်တော့လေ။ သူတို့ လွှတ်ချင် လွှတ်မှာပဲ ထားခြင် ထားမှာပဲ အဲဒါကိုတော့ ဘယ်လိုမှ မအောင့်မေ့ပါဘူး။ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ထဲမှာ အကြုံးဝင်ပြီး လွတ်လာတာပါ။
ဖြေ။ ။ နေရတဲ့အတွေ့အကြုံ ဆိုတာကတော့ ထောင်တိုင်းထောင်တိုင်းမှာက မနက်မုန့် ၊ နေ့လယ် ထမင်း ၊ ရေ ၊ မီး ပေးနိုင်ရင်ကတော့ ဒါ ထောင်တာဝန်က ကျေပြီလေ။ ကျန်တဲ့ပြည့်စုံမှု ဆိုတာကတော့ အိမ်ကလာရင် လာသလောက် အဆင်ပြေကြရတာပါပဲ။ အထဲထဲမှာကတော့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်တယ် ၊ ကိုယ့်အိမ်မှာနေသလိုပဲ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်တယ်။ ရောက်တဲ့ထောင်မှာတော့ ကိုယ့်အိမ်မှာနေသလိုပဲ ရောက်တဲ့ အရပ်မှာပဲ ဘုရားဝတ်ပြုချိန် ၀တ်ပြုတယ်။ ကျမ်းစာ ဖတ်ချိန် ဖတ်တယ် ။ စားချိန်စား သောက်ချိန်သောက် ဒီလိုပဲ နေလိုက်တယ်။ သောက သိပ်မထားဘူး ။ မန္တလေးထောင်ရောက်တော့လဲ သြော် ငါဒီမှာနေရမှာပဲ ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အောက်မေ့တယ်။ မြစ်ကြီးနားထောင်ရောက်တော့လဲ ဒီမှာနေရမှာပဲ ဒါပဲ ၊ အေးအေးလေးပဲ နေလိုက်တယ်။ ပူတာအိုရောက်တော့လဲ ဒီမှာနေရမှာပဲ ဒီလိုပဲနေလိုက်တယ်။ ဘာကြောင့်မို့လို့လဲ ဆိုတော့ အကျင့်သီလကောင်းပြီး ကောင်းတဲ့ အလုပ် လုပ်တာပဲလေ။ အိမ်မှာနေတာနဲ့ ဟိုထဲမှာနေတာနဲ့ ဒီလိုပဲနေလိုက်တယ်။ တစ်ခြားခေါင်းထဲမှာ ဘာမှ မထားဘူး။ ထောင်ကျနေတယ်လို့လဲ မထားဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကောင်းတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ပြီး ထောင်ထဲ ထည့်ထားတာပဲလေ ဟုတ်တယ်မလား။ အဲဒီအခါကျတော့ ဘယ်အရပ်မှမဆို ကိုယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ် အကျိုးရှိအောင်နေမှာပဲ။ အဲဒါပဲ။
ဖြေ။ ။ ဘယ်နှစ်နေရာလဲဆိုတော့ မန္တလေးကနေ ပူတာအိုကိုပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ မြစ်ကြီးနားမှာ ခဏ၀င်ရတယ်။ ထရန်စစ်ပေါ့။ မန္တလေးကနေမှ လေယာဉ်နဲ့ မြစ်ကြီးနားကို ပို့တယ်။ မြစ်ကြီးနားကနေမှ လေယာဉ်နဲ့ ပူတာအိုသွားတယ်။
မေး။ ။ ဒီနေ့ပြန်လွှတ်မယ်ဆိုတာရော ကြိုတင်ပြီး အကြောင်းကြားထားတာ ရှိလား။
ဖြေ။ မနက်က (၈)နာရီလောက်မှာ ထောင်မှူးမလေးက လာပြောပါတယ်။ ထောင်မှူးတစ်ပွင့် လေးက။ အဘွား တဲ့ အဘွားလွတ်မယ် ထင်တယ် တဲ့။ အဖွားပစ္စည်းလေးတွေ သိမ်းထားပေးပါလား တဲ့။ အဖွားကတော့ လွတ်ပြီဆိုမှ သိမ်းမယ် ။ မဟုတ်လဲ ကိုယ့်ပစ္စည်းက စံနစ်တကျထားထားတာလေ။ သို့သော်လည်း ကိုယ့်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေက ဟိုမှာရှိတဲ့ အကျဉ်းသူတွေကို ပေးခဲ့ဖို့ စီမံဖို့ လိုတယ်လေ။ လွတ်ပြီ ဆိုမှပဲ သိမ်းမယ်ဆိုတော့ ။ ခဏနေကြတော့ အဖွား အဖွားနာမည် ပါတယ် ဆိုတော့မှ ပေးစရာရှိတာတွေ ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာတင် ရုံးက လာခေါ်တယ်။ ရုံးမှာ ၆၁ ယောက် ရောက်နေပြီ။ ထောင်မှူးလဲ ရောက်နေပြီ။ သူတို့လဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်တာပါ။ လေယာဉ်ကွင်းရောက်တော့ လေယာဉ်ကရောက်နေပြီ။ အဲဒီလေယာဉ်စင်းလုံးနဲ့ ရန်ကုန်ကလူရန်ကုန်။ မန္တလေးကလူ မန္တလေးပေါ့။ နိုင်ငံရေးသမားတော့ တိုက်ထဲမှာရှိတဲ့သူ အကုန် ကုန်သွားပါပြီး ကျန်တာကတော့ အင်မီဂရေးရှင်း ၊ ကာစတန်ပါမယ် ၊ ရဲပါမယ် ၊ ထောက်လှမ်းရေးပါမယ်။ အကုန်လုံး လူကြီးလူကောင်းပါပဲ။ (၁၀၅)ကိစ္စတုန်းကပေါ့ နိုင်ငံရေးသမားကတော့ (၃၀) ၀န်းကျင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အားလုံး (၆၁)ယောက်ပါ။
ဖြေ။ ။ ကောင်းပါတယ်။ အကုန်လုံးကို လွှတ်တယ်ဆိုတာ ဒီနေ့လက်ရှိ အစိုးရအပေါ် လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ ယုံလာမယ်လေ။ ကောင်းတာတွေလုပ်တယ် ဆိုပြီး ။ လူတွေက အစကတည်းက နိုင်ငံရေးလုပ်တယ် ဆိုတာ လူပုဂ္ဂိုလ်စွဲနဲ့ လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲပြီး လုပ်တယ်ဆိုတော့ အလုပ် လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို လက်ခံတယ် ဆိုတာ ချီးကျူးတယ် ။ လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ခုလို လက်ခံတယ်ဆိုတော့ တိုင်းပြည် တိုးတက်တယ်လေ။ လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဘေးဖယ်ထားရင်တော့ မတိုးတက်ဘူး။ ဒီကိစ္စက လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်(၂၀)က စပြီးတော့ ဒီလိုအစိုးရမျိုးနဲ့ လုပ်ခဲ့ရင် ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ အများကြီး တိုးတက်နေပြီ။ ခုဟာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ နိုင်ငံရေး ဒီမိုကရေစီရေး ဆိုတာပြောခွင့် မရှိဘူး။ ပြောရင် အကုန် ဆွဲထည့်လိုက်တာ အဲဒါတွေက ဆုတ်ယုတ်ကုန်တာ။
မေး။ ။ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာရော ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကို အလုပ်လုပ်ဖို့ ပြန်လည် လက်တွဲ ခေါ်ယူမယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုများ ဖြစ်နိုင်ပါလဲ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါကတော့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့အပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ရဲ့ အပိုင်းဖြစ်နေတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မဟုတ်တဲ့အတွက် မဖြေနိုင်ပါဘူး။
မေး။ ။ နောက်ထပ် ဘာများဖြည့်စွက်ပြောချင်ပါသေးလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒီနေ့အစိုးရဟာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်တယ်။ ဒီအလုပ်ကိုပဲ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ပေါ်လွင် ထင်ရှားအောင် သွက်သွက် လက်လက်လေးနဲ့ လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံဟာ အနှစ်(၂၀) ကျော်ကြီး ဆုတ်ယုတ်လာခဲ့တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူရော အာဏာပိုင်ရော တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေရော နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေရော အားလုံးဟာ တော်တော် ပင်ပန်းလာကြပါပြီ။ ဒီအစိုးရအသစ် အနေနဲ့ကတော့ အရင်တုန်းက ကိစ္စတွေကို လက်ခံပါတယ် ။ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုလဲ ဘယ်လို ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘယ်လို အရေးယူခဲ့လဲ။ ဒါကို သမိုင်းကောင်းချင်လို့ လက်ရှိအစိုးရက လုပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ သမိုင်းကောင်းအောင် လုပ်ဖို့ လူတိုင်းမှာ တာဝန် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီထက်က ပိုပြီးသွက်သွက်လေး လုပ်ဖို့ လိုပါတတယ်။ ကြိုလဲ ကြိုဆိုပါတယ်။ ခုလို လွှတ်ပေးတာကိုလဲ ကျေနပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ ပြတ်ပြတ် သားသားနဲ့ ဆက်ပြီးလုပ်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Posted: 18 Jan 2012 07:24 AM PST
Posted: 18 Jan 2012 05:24 AM PST
With Egypt's Islamists scoringacrushing electoral victory over their secular opponents, governments and pundits alike are considering the likely denouement of the vaunted Arab Spring in the region's largest country, Turkey. It is therefore worth noting some very troubling recent developments in the country that the Muslim Brotherhood and many in the West consistently tout asasuccessful "Islamist democracy" worth emulating.
On January 5, Turkish prosecutors arrested Gen. Ilker Basbug — the commander, until 2010, of the Turkish Armed Forces appointed by prime minister Recep Erdogan's government — for allegedly plotting terrorist activities against the state. Basbug now faces the same predicament as 300 other military officers who have languished in jail for years on dubious charges of conspiracy to overthrow the AKP (Justice and Development Party) government, withoutasingle conviction to date.
Perhaps even more disturbing, the regime has begunanew wave of arrests of journalists, bringing their total in prison to 98, as reported by the Turkish journalists union, though this number is not exact. Few of them have been convicted of anything, even though some of them have been kept in jail for four years. Using terrorism legislation to keep suspected opponents in jail for years on trumped-up charges appears to have become the Erdogan regime's favorite method of punishing and intimidating the opposition and stifling the press. Nor are these tactics limited to his political opponents. Inasearing indictment of the profoundly undemocratic nature of the justice system under Erdogan, the Turkish Human Rights Association revealed that 42 percent of the 128,000 people currently imprisoned in Turkey have never been convicted ofacrime. To find preemptive incarceration on this scale, one would have to go back to the totalitarian regimes of the 20th century.
Not surprisingly, the AKP's increasingly repressive policies have causedastorm of indignation among opposition parties in parliament, where the AKP hasacommanding majority. The leader of the main opposition party, CHP (the Republican People's Party), Kemal Kilicdaroglu, accused the government of engaging ina"blood feud" and of having transformed the country into an "open prison," while another opposition-party leader blasted the AKP for "legitimizing oppression, lawlessness, and slander."
In response,agovernment prosecutor has asked the Ministry of Justice to remove Kilicdaroglu's parliamentary immunity, making it possible for him also to be indicted and thrown in jail for "attempting to influenceafair trial." As if to confirm that the prosecutor acted with the full support of the government, Prime Minister Erdogan opined tersely that "what needed to happen has happened," adding that the prosecutor's action was long overdue. Should the Islamist government carry out this blatant threat to silence even the duly elected opposition, it would be difficult to argue that the AKP regime maintains evenasemblance of democracy.
Which raises the question why the AKP appears to be in suchahurry, seemingly overreaching atatime when there is no visible challenge to its political dominance. The short answer is that, just below the surface, problems are brewing that may soon presentaformidable threat to Turkey's Islamists. To begin with, the grand geopolitical scheme of the AKP, known as "Neo-Ottomanism," is in shambles. The policy was designed to re-createaTurkish Islamist sphere of influence in former Ottoman domains, based on the radicalization of Muslim minorities andaputative "zero problems with neighbors" policy, but its author, Foreign Minister Ahmet Davutoglu, has little to show for his efforts. Nor has he succeeded in convincing the Balkan Christian nations long enslaved by the Ottomans that "the Ottoman centuries wereasuccessful history" that "needs to be re-created." Worse still, in his hysterical reaction to the new French law making the denial of Armenian genocideacrime, Davutoglu has managed to alienate the French — especially Nicolas Sarkozy, whom he compared to dictators Bashar al-Assad and Moammar Qaddafi. (He conveniently forgot that the former wasafavorite Neo-Ottoman partner, while the latter dispensed the al-Qaddafi Human Rights Prize toagrateful Erdogan.) Erdogan's anti-Israeli policy has created yet another axis of intractable conflict, and recent indications that Ankara is taking over from Tehran the role of chief sponsor of Hamas is only likely to exacerbate it.
Domestically, the AKP has aggravated the conflict with Turkey's large Kurdish minority to such an extent thatanew flare-up of widespread Kurdish anti-government violence is no longer unthinkable. Neither is the large, educated, and secular Alevi community anywhere near making its peace with the Islamists.
Perhaps most significantly, there are now clear signs that the AKP's greatest achievement and the most important source of its popularity,abooming economy, may soon beathing of the past. Over the past year, the Turkish stock market has lost half of its value, inflation has reached double digits, and the lira has depreciated 20 percent against the dollar. With the country importing twice as much as it exports, the trade deficit is an unsustainable 10 percent of GDP. Indeed, none of these trends is sustainable, which is why the International Monetary Fund now projectsadramatic slowdown of Turkish GDP growth — from 7.5 percent in 2011 to2percent in 2012.
Despite these troubling signs on all fronts, there is no evidence that the West, especially Washington, is willing to go beyond the usual apologetics for the AKP regime and admit that our NATO ally is becoming an enemy of the West and everything it stands for. If this continues, American politicians may begin having to ask, "Who lost Turkey?"
— Alex Alexiev isavisiting fellow at the Hudson Institute in Washington, D.C. He tweets on national-security politics at twitter.com/alexieff. National Review
Dogs don't attack unless they are provoked? Here's an interesting story from overseas that saysadifferent story to such claims often from doting animal lovers:
Jogger who lost foot details terrifying dog attack
The 62-year-old man who lost his
left foot when
Posted: 18 Jan 2012 03:06 AM PST
Greatest Burmese Muslim Hero and Martyr who had even successfully persuaded Daw Aung San Suu Kyi to join politics under NLD.
Posted: 18 Jan 2012 02:32 AM PST
A doctor entered the hospital in hurry after being called in for an urgent surgery. He answered the call as soon aspossible, changed his clothes and went directly to the surgery block. He found the boy's father going and coming in the hall waiting for the doctor. Once seeing him, the dad yelled, "Why did you take all this time to come? Don't you know that my son's life is in danger? Don't you have the sense of responsibility?"
The doctor smiled and said, "I am sorry, I wasn't in the hospital and I came the fastest I could after receiving the call…… And now, I wish you'd calm down so that I can do my work."
The doctor smiled again and replied: "I will say what Job said in the Holy Book "From dust we came and to dust we return, blessed be the name of God". Doctors cannot prolong lives. Go and intercede for your son, we will do our best by God's grace."
"Thank goodness! Your son is saved!" And without waiting for the father's reply he carried on his way running. "If you have any question, ask the nurse!!"
NEVER JUDGE ANYONE BECAUSE You never know how their life is or as to what is happening or what they're going through. Just think ABOUT this moment.
Thanks to reader TCK who sent me this very meaningful post. Do leaveacomment to share your response. Havealovely evening!
Posted: 18 Jan 2012 01:04 AM PST
The top 8888 leaders were arrested on 27th June 2006 on the 18th anniversary of the founding of the National League for Democracy.
On the 02nd October 2006 the remaining 88 Generation Students group led by Ko Mya Aye and Ko Jimmy started_
A. Signature for Petition
B. "White Expression" Campaign
C. "Multi Religious Prayer Campaign,"
Which lead to the:
Famous Saffron Revolution which shook Myanmar and causes Tsunami vibration waves around the world.
Multi-religious prayer campaigns for Daw Aung San Suu Kyi's mother Daw Khin Kyi
Multi-religious prayer campaigns for Peace in Kachin State
And the present Multi-religious prayer campaign for Peace in Myanmar
B. Later they organized the"White Expression" Campaign_
C. "Multi Religious Prayer Campaign,"On the 29th October, they startedathird campaign,
called "Multi Religious Prayer Campaign,"
"Burmese people have to stay away from politics, because the government has kept them out. They are always looking foraway to participate in politics, so that is why we are trying to involve them."
So the 88 Generation Student Group and Leaders are the prime movers and shakers of STORMY Burma Politics in 2006 but sadly now during the SPRING time of 2012 Myanmar politics conveniently ignored the sacrifices and struggles of Ko Mya Aye just because of his religion and his daughter had supported the marginalized Muslim group of Myanmar?
Posted: 18 Jan 2012 01:22 AM PST
ANAK BUKIT - Sultan Kedah, Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah memuji pentadbiran negeri diterajui Menteri Besar, Datuk Seri Azizan Abdul Razak kerana berjaya melaksanakan beberapa pembaharuan dan kemajuan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Beta harap aktiviti pembuatan yang kini berkembang pesat dapat terus dimajukan sehingga menjadi tumpuan utama selain menarik pelabur asing dan tempatan untuk melabur dan mendirikan kilang perindustrian di Kulim Hi-tech Park, Sungai Petani, Kuala Ketil, Gurun, Yan dan Bukit Kayu Hitam".
"Beta amat sukacita kerana Kedah sentiasa aman dan sejahtera setiap masa. Walaupun terdapat beberapa peristiwa hangat yang berlaku akhir-akhir ini, tetapi ia dapat dikawal hasil kerjasama Kerajaan Negeri dan rakyat," titah baginda.
"Tidak ada peristiwa yang tidak diingini berlaku dan rakyat yakin dengan kestabilan politik negeri ini. Beta harap semua pihak komited menjalankan tugas, ikhlas, amanah serta telus dalam mengendalikan urusan pentadbiran," titah baginda.
"Jentera pentadbiran dan pengurusan negeri yang cekap amat penting untuk merancang dan melaksana dasar dan program Kerajaan Negeri. Oleh itu, anggota perkhidmatan awam perlu berpegang teguh pada konsep amanah dan kepimpinan berintegriti," titah baginda.
"Saya pujilah Ustaz Azizan ni. Semua kita perlu ikut contoh macam Ustaz Azizan, cukup elok. Jangan hendak tamak itu dan ini. Dia tidak pentingkan diri tetapi sentiasa utamakan keperluan rakyat," ujarnya berucap pada Multaqa Daie dan Aktivis Islam di Kompleks PAS Kawasan Sik, awal bulan ini.
"Dasar kita bukan cari benda. Allah jadikan kita untuk takwa, dengan takwa Dia akan berikan rezeki yang kita tidak sangka-sangka. Maka, mesti ikhlas dan ikhlas itulah pintu untuk mencapai matlamat," terang beliau yang juga Mudir Madrasah ar-Rahmaniah.
"Jangan kuat kerja politik sahaja, kena ambil faham sama ilmu-ilmu akidah. Hari ini dah celaru macam-macam. Maka kitalah nak kena ambil tanggung jawab ni," ujarnya menyuntik semangat.
Multaqa bertemakan "Menghadapi Cabaran Ummah Dan Persiapan PRU13" itu dihadiri lebih 1,000 aktivis PAS Kedah dan diadakan sebagai kesinambungan Ijtimak Tarbawi PRU13 di Taman Melewar bulan lalu....Harakah cetak.
Japanese pop star Ayumi Hamasaki is going to divorce her Austrian actor Manuel Schwarz after justayear into marriage.
"We spoke about this and we thought we could maintain our relationship by travelling to see each other, but at some point, physical distance becomes emotional distance," she explained. "When I thought about our future, I realized I couldn't see myself returning to the state of mind I was in when I agreed to live in America."
The couple met each other when filming Hamasaki's Virgin Road MV (Schwarz as lead actor) in August 2010. They tied the knot in Las Vegas on January 1, 2011.
Ayumi Hamasaki to divorce husband from YeinJee's Asian Blog
Posted: 17 Jan 2012 10:28 PM PST
Chinese New Year Lighting – Those who celebrate Christmas, they will getaChristmas tree and decorate it nicely with bells, candies, gift boxes as well as LED lighting. My family is not reallyaChristmas person when it comes to Christmas, our house doesn't hasaChristmas tree.
However, when it comes to Chinese New Year, we will hunt for Chinese lanterns as well as those LED lighting. Different types of lighting can be seen at almost every electrical and lighting shops in Penang. It sort of light up some part of the city too. Now you see that Chinese has their love on lighting too.
Do you decorate your home of garden with these kind of lighting?
"Spesifikasi pembinaan bangunan baru perlu ada sistem bomba di setiap selang dua tingkat daripada keseluruhan bangunan yang dibina.
"Dalam kes ini, sistem bomba sepatutnya ada di tingkat 28. Namun hanya sistem bomba di tingkat 25 bangunan sahaja yang berfungsi menyebabkan kita mengambil masa satu jam setengah untuk menyambung hos bagi memadamkan api," katanya ketika ditemui di lokasi kejadian.
Gerakan councillor's speech goes viral, gets bashing
The video in question isa20-minute speech in Cantonese ata1Malaysia event on Jan7in Ipoh. The speech was made by Ipoh City Council member Ceylyn Tay who without Wasting any time launched intoatirade against Pakatan Rakyat, arguing that the birth of coalition had led to more racialism resulting in an undesirable "two-race system". Hence, Malaysia should not haveatwo-party system.
The original YouTube clip, uploaded by user TalkEastTalkWest, was taken down yesterday afternoon after about 16,000 views with an overwhelming majority of 1,237 viewers who voted on the video gave it the 'thumbs down', compared to 24 who gave it the 'thumbs up'.
The only 'race' right now is Umno. Other component parties in BN are second class. The rakyat is pariah but NEVER underestimate the UNDERDOGS!
Posted: 17 Jan 2012 08:53 PM PST
This will be the first time the English Wikipedia has ever stagedapublic protest of this nature, and it'sadecision that wasn't lightly made. Here's how it's been described by the three Wikipedia administrators who formally facilitated the community's discussion. From the public statement, signed by User:NuclearWarfare, User:Risker and User:Billinghurst: